China Folding yemari trolley DX3012 mugadziri uye mutengesi | Duoduo
Ita Nha .:DX3012
Yakashama saizi: 51 × 48.5x107CM
Saizi yakaiswa: 48.5x81x6.5CM
Saizi yepasi: 48.5x35CM
Hondo dzemavhiri: Φ170mm
Ruvara: Grey & Nhema
Chishongedzo: Metal & Plastiki
Saizi yemabhokisi: 82.5x49x20cm
Iyo inorema mutoro ruoko ruoko ngoro, yakanaka dhizaini uye yakasimba, ine yekuwedzera epurasitiki inobata, unogona kuishandisa nenzira mbiri dzakasiyana. Iyo yakakodzera kushandisa mumhuri uye kubuda. Iwo mavhiri uye epazasi ndiro anokwenenzverwa, ayo anochengetedza zvikuru nzvimbo uye inounza hukuru hwakanyanya kuhupenyu hwedu hwezuva nezuva nekufamba. Zviri nyore kuisa mumota medu. Iyo ndiro yepasi yakagadzirwa neAluminium, inorema mutoro uye anti-ngura, zvakare chemukati anti-slip design uye yakachengeteka kushandiswa.
Aluminium yekupuruzira mutoro ruoko rori mbiri neruoko nepadiki inokodzera kune yakakura mabasa inoda ruoko rori iyo inoputira yekufamba kana kuchengetedza. Pese paunofanirwa kufambisa hombe, zvinorema zvinhu, rori yeruoko haina kukosha - zvisinei, dambudziko riripo nderekuiisa kana uchinge waitwa naro. Ndokusaka ichi chingwe ruoko rori iri zano rakanaka. Kana isiri kushandiswa, inopetwa pombija compact, saka zviri nyore kuturika pamadziro kana chitoro mukabati kana trunk yemota. Compact yakapetwa saizi inokwira mumotokari, maveni, kunyange pasi pematafura. Iyo nyore Fold-up dhizaina inoita kuti iite uye nyore kuchengeta.
Isingaremi maindasitiri-giredhi trolley inobatsira kufambisa zvinhu zvinorema. Sevha musana wako uye utakure zvinhu zvakatenderedza neyekushandisa chaiyo yebasa. Yakakwana kushandiswa pamba, hofisi, bhizinesi, kufamba kana kutenga. Rega yedu yakashata dolly iite inosimudza inorema. Gomo-Iro! kupeta ruoko rori uye dolly ndiyo mhinduro yako yekupedzisira pakufambisa zvinhu zvinorema kutenderedza. Sevha musana wako uye utakure zvinhu zvakatenderedza neyekushandisa chaiyo yebasa. Iyi ngoro inoshanda zvakasiyana pakukodzera kushandiswa kumba, hofisi, bhizinesi, kufamba kana kutenga.
Yepfuura: Folding mikwende trolley DX3011
Inotevera: Folding mikwende trolley DX3013